Wadaadkii xabsiga ku ciqaabnaa ee caashaqu taabtay!! (Qaybtii 2-aad) | Hadalsame Media
Home Wararka Wadaadkii xabsiga ku ciqaabnaa ee caashaqu taabtay!! (Qaybtii 2-aad)
Wadaadkii xabsiga ku ciqaabnaa ee caashaqu taabtay!! (Qaybtii 2-aad)
(Qaahira) 16 Agoosto 2019 – Qaybtii labaad ee dhacdada ka hadleysay hogaamiyaha ururka ikhwaanul muslimiinka dalka Masar Maxamed Badiic iyo jaceylkiisii intii uu xirnaa jeelka ama xabsiga ku Galey sannadihii 70-meyadii waxa aan ku joojiyey iyadoo Maxamed Badiic uu qalbigaasi taabtey jaceyl ugub ah oo uu u qaadey gabar uu dhaley nin xabsiga dalka masar ay kuwada jireen iyadoo gabadhii Sumayi oggolaatay Maxamed Badiic, waxayna ku ballan-qaadday in ay sugi doonto inta uu jeelka ka soo baxayo. halkii ayaan kasii amba qaadayaa iyo qeybta sadexaad oo ugu dambaysa ee la socod wanaagsan.
Markii xaalku halkaas uu marayey ayaa waxaa dhacdey in Maxamed Badiic ay maalin xabsiga ama jeelka kusoo booqdeen aabbihii iyo hooyadii dabeedna Arrintii buu u sheegay. Hooyadii way u beer-jileecday, aabbihii se wuu u qaadan waayay “waar Aabbe, xaaladda aad ku sugan tahay waad og tahay, xoolo meel innooguma xeraysna, xataa marka aad soo baxdo shaqo kuu sii diyaar ahi ma jirto. Midda kale, waa gef in gabar yar oo calaf-doon ah waqtiga laga halleeyo oo ay lix sanno ku sugto, hadhowna sida ay wax ku dhammaan Alle og yahay”
Calaacalkaas buu odaygi oodda ka soo qaaday oo wiilkiisii ku hafiyay.
Miyuu warkaas iyo walaacaasiba ku socdaa, waa nin daaqad jaceyl ku furan tahay oo duniduba u qoslaysee. Dood iyo lafa-gur dheer kadib, hooyadii ayaa odaygii ku qancisay in talada wiilka la qaato, waxaana la isla afgartay in qoyskii Shanaawi la soo booqdo. Isla habeenkiiba, hooyadii iyo aabbihii baa booqasho ugu tegay qoyskii inanta ama gabadha. Waa la soo dhaweeyay, si fiicanna waa la isu soo dhaweeyay. Habeenkaas labadii waalid farxad bay ku seexdeen kadib markii ay soo xaqiijiyeen rabitaankii wiilkooda.
Subaxdii ayaa tilifoonkii guriga la soo wacay. Eebboow, war san iyo weersan. Toloow warkan la soo kallihiyay muxuu yahay? Meesha laga soo garaacayaa waa xaggee? Ma jeelkii baa? Mooyi. Toloow miyay dileen, illeen waa niman bahalo ah oo wax waliba ka suuroobee? Ma wax kale ayaa dhacay? Alloow sahal. Odaygii baa isaga oo naxdini ku jirto tilifoonkii qabtay. Qoor iyo xero, waaba inankiisii ama wiilkiisii Maxamed Badiic oo soo socda, jeelkiina laga soo daayay oo la soo saamaxay. Farxad weynaa.
Waa arrimo layaab leh oo isku sidkan ama isku aaday, waana mucjisooyin Rabbaani ah oo isku toos-toosan. Markii uu sawirka dhiibay, subaxdiiba Al-shanaawi ayaa la soo daayay. Galabtii ay aabbihii iyo hooyadii qoyskii inanta soo booqdeenna isagii baa la soo daayay. Wax waliba si fiican bay u socdaan.
Qoyskii Maxamed Badiic oo wada socda ayaa booqday qoyskii gabadha. Si fiican oo farxad leh baa loo soo dhaweeyay, waxyar markii la fadhiyay buu Shanaawi yiri: “Maxamedoow, orod hadda dhaadhac oo wadaad innoo doon, Ilaahayba waxa uu jeelkii innooga soo daayay in aad guursatee”.
Taw buu yiri oo wadaadkii soo qabay, inantiina halkii loogu meheri. Shilin lama weydiin oo ma buu haysan. 30 shilin oo wadaadku ujuuro ahaan u qaatayna, aabbihii baa ka bixiyay.
Markiiba inantii waa lagu soo daray oo gurigii aabbihii buu keenay. Isaga oo bishii aqal-galka ku jira ayaa jaamacaddii uu ka shaqeyn jirey looga yeeray, wixii loogu yeerayna waxa uu noqday in uu shaqadiisii ku soo noqdo. Intaas oo kaliya ma ahee, waxa la soo siiyay kala-bar mushaharkiisii intii uu xirnaa. Halkaas buu noloshiisii iyo shaqadiisii dib uga bilaabay noloshana ay kuwada wadaageen gabadhii uu jeclaadey isagoo xabsiga ku jira.
Walaal guud ahaan intaas ayey ku dhantahay qormadan waanan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee qiimaha badan inaad wax iga siisey lana socotey Sadexda qeybood ee dhacdadan ay ka koobneyd waa inoo qisooyin iyo qormooyin kale oo xiiso badan Insha alah.
Previous articleMW Jubbaland oo Beesha Caalamka siiyay jawaab jikaaran
Next articleDHEGEYSO: ”Waxaa naloo tababaray 40 qofood!” – Masaajidda Sweden oo ilaalo samaystay! (Sabab?)